Diiwaanka ECM (Maxay tahay iyo sida loo Furi karo)
Windows Noocyada Faylka
Maxay Tahay ECM File?
Sida loo Furi karo, Loo Bedeli karo, iyo Bedelida Diiwaanada ECM
Faylka leh faylka dheeraadka ah ee ECM waa faylka ECM Disc File, ama mararka qaar loo yaqaan faylka Code Modeler Error. Waxay ku sawiraan faylasha sawirada kuwaas oo keydiyay content iyada oo aan lahayn nidaamka saxda ah ee saxda ah (ECC) ama nidaamka ogaanshaha khaladaadka (EDC).
Xididaadda ECC iyo EDC waxay badbaadineysaa wakhtiga iyo xawaaraha isku xiran tan iyo markii faylka soo baxay uu yar yahay. Dhibcaha waa markaa feylka la daabaco oo leh kombuyuutar guud sida RAR ama farsamaynta kale ee farsamada algorithm si loo yareeyo xajmiga faylka xitaa ka badan (waxaa laga yaabaa in lagu magacaabo sida file.ecm.rar ).
Sida faylasha ISO , ECM waxay qabtaan macluumaad kale ee qaab arji ah, sida caadiga ah si ay u kaydiyaan faylasha sawirada sida BIN, CDI, NRG, iwm. Kuwani badanaa waxaa loo isticmaalaa in lagu keydiyo noocyada daabacan sawirada sawirada muuqaalka sawirada.
Waxaad ka akhrisan kartaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan sida qaabka faylka ECM Disc Sawirku u shaqeeyo shabakadda Neill Corlett.
Fiiro gaar ah: Foomka Cmpro Tusaalooyinka faylka wuxuu isticmaali karaa faylka ECM sidoo kale ma jiraan wax macluumaad ah oo ku saabsan.
Sida loo Furo Foomka ECM
Foomamka ECM waxaa lagu furi karaa ECM, barnaamij khadka taleefanka ee Neill Corlett, oo ah horumariyaha qaabka. Eeg sida loo Isticmaalo qaybta barnaamijka ECM ee hoose si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Foomamka ECM waxay kaloo la shaqeeyaan Gemc, ECM GUI, iyo Rbcafe ECM.
Sababtoo ah feylka ECM waxaa lagu xakameyn karaa ari sida RAR faylka si uu ugu keydiyo meel adag , waxaa laga yaabaa in marka hore la isku wareejiyo faylka / feylka faylka / feylka faylka - waxaan jecelahay waa 7-Zip.
Haddii xogta ku jirta faylka ECM ay ku jirto qaabka ISO, fiiri Sida loo gubiyo ISO Image File to CD, DVD, ama BD haddii aad ubaahan tahay inaad caawimo ka hesho qalab. Ka eeg gubida ISO ilaa USB si loogu caawiyo si habboon loogu rakibo fiilada .
Talo: Foomamka ECM ee aan ahayn faylasha sawirka sawirrada ayaa laga yaabaa inay awood u yeeshaan inay u furfuraan tifaftiraha fudud sida qoraalka qoraalka ah sida Windows, ama wax aad u sareeya oo ka sareeya liiska Tifaftirayaasha Leh ee Bilaashka ah. Haddii faylka oo dhan uusan ahayn mid qoraal ah , oo kaliya qaar ka mid ah haddii la arki karo, waxaad weli awood u leedahay inaad ka hesho wax faa'iido leh oo ku jira qoraalka ku saabsan nooca software oo furi kara faylka.
Sida loo Isticmaalo Barnaamijka ECM
Qodobbada (abuurista) iyo xallinta (furitaanka) feylka ECM waxaa lagu dhammayn karaa barnaamijka ECM ee Neil Corlett ee kor ku xusan. Waa adeega khadadka taleefanka, sidaas darteed wax walba oo dhan waxay ku socdaan Baaqa Talo .
Si aad u furto qaybta ECM ee qalabka, soo saar waxyaabaha ka baxsan faylka "zip" (version) ee ZIP oo lagu soo daabacay boggiisa. Barnaamijka aad soo socotid waxaa la yiraahdaa unecm.exe , laakiin waa inaad adigu heshaa adigoo u maraya amar sir ah.
Habka ugu fudud ee loo sameyn karo waa inaad si toos ah ugu qaaddid faylka ECM barnaamijka unecm.exe si loo soo saaro feylka muuqaalka. Si aad u sameysid faylkaagaaga ECM, kaliya jooji feylka aad rabto in aad ku qorto faylka ecm.exe .
Si aad taas u samayso halkii aad ku jiidi lahayd jiid iyo kala-soocasho, waxaad u baahan tahay inaad furato amar amar ah (waxaad u baahan kartaa inaad furto mid sare ) kadibna ku soo dhawow foormka barnaamijka ECM. Habka ugu fudud ee tan loo samaynaayo waa marka ugu horeysa ee aad ku bedesho faylka aad ka soo bixisay kore, si aad u fudud sida cmdpack , ka dibna soo geli amarkan :
Amarkani waa inuu bedelo si toos ah shaqada si uu u galo barnaamijka ECM. Saaxiibaduna way kala duwanaan doonaan waxayna ku xiran yihiin meesha ay ku qoran tahay mishiinka cmdpack ee ku yaalla kombiyuutarkaaga.
Kuwani waa amarrada laguu ogol yahay inaad isticmaasho:
Si aad u codsato:
ecm cdimagefile ecm cdimagefile ecmfile ecmfile ecmfile
Si aad u abuurto faylka ECM leh qalabkan xargaha, gali wax sida:
"C: \_ Other \_ Games \_ MyGame.bin"
Tusaale ahaan, faylka ECM waxaa lagu abuuri doonaa isla faylka sida faylka BIN.
Si loo go'aamiyo:
unecm ecmfile unecm ecmfile cimagefile ecmfile cdimagefile
Xeerar isku mid ah ayaa lagu dabaqayaa furitaanka / decoding faylka ECM:
unecm "C: \_ Other \_ Games \_ MyGame.bin.ecm"
Sidee loo bedelaa faylka ECM?
Qalabka PakkISO waxaa loo isticmaali karaa in lagu beddelo faylka ECM feylka la gali karo oo la gubi karo. Haddii aysan taasi shaqeyn, isku day barnaamijka lagu xusay buugan ku yaal StramaXon.
Fiiro gaar ah: PakkISO downloads in 7Z format, sidaas darteed waxaad u baahan doontaa barnaamij sida PeaZip ama 7-Zip si loo furo. Barnaamijka kale ee ku xusan qodobka StramaXon wuxuu adeegsanayaa qaabka RAR, sidaa darteed waxaad isticmaali kartaa isla foomka unzip file si loo furo.
Markaad haysato faylka ECM ee qaabka BIN, waxaad u bedeli kartaa BIN ISO sida barnaamijka sida MagicISO, WinISO, PowerISO, ama AnyToISO. Qaar ka mid ah codsiyadan, sida WinISO, ayaa markaa bedeli kara ISO si CUE haddii aad rabto in faylkaaga ECM ugu dambeyntii ku jiraa qaabka CUE.
Wargelintaadu weli ma furan tahay?
Noocyada faylasha qaarkood waxay wadaagaan qaar ama dhammaan waraaqaha xajmiga faylka isku mid ah laakiin macnaheedu maaha in ay ku jiraan qaab isku mid ah. Tani waxay noqon kartaa jahawareer marka la isku dayayo in la furo feylka ECM sababtoo ah waxaa laga yaabaa inaysan dhab ahaan noqon ECM faylka ... laba jeer hubi faahfaahin dheeraad ah si aad u hubiso.
Tusaale ahaan, haddii feylkaaga uusan u muuqan inuu yahay faylka sawirka sawir, waxaa laga yaabaa inaad ku jahwareeriso faylka EMC, oo ah faylka Striata Reader Encrypted File. Waxaad furi kartaa faylka EMC oo leh Striata Reader.
Waa maxay faylka SRT?
Maxay Foomka ODT?
Waa Maxay MSR File?
Maxay Foomka AVC?
Waa maxay faylka AV?
Waa maxay XWB Faylka?
Waa maxay DOP Faylka?
Waa maxay JPG ama JPEG File?
Sida loo Siibo Nambarada Bogga ee QuarkXPress
Sida loo Qabto Your ICloud Your Contacts iyo Data Calendar
Google Tracks - Tababarka GPS iyo Khariidadeynta
Dump - Command Linux - Unix Command
Talooyin loogu talagalay isticmaalka Tokscape si ay u sameeyaan sheybaarada mashiinka jarista
Maxay ahayd Adeegga Aereo TV-ka?
Diiwaanada DVD-ga ma leeyihiin xayawaanka gobolka?
Sidee Looga Diiwaan Gelin Doono ama Macalinkaaga iPad-ka
IPod Shuffle: Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Imisa MACLUUMAAD BUUGSIGA KALA DUWAN KARAA?
Ku dhowaanshaha Isgaarsiinta Goobta (NFC)
A Slim Touch: 2016 ee Amazon Kindle
Sidee loo abuuray raadinta 'Graph Search'
Baro Command Linux - execv
Waa Maxay DOCX File?
Ku dhaji dukumiintiga Microsoft Office Isticmaal Password
Skype for Mac Download iyo Nidaamka Hagaajinta
Darawallada Intel Chipset v10.1.1.42
"Black iyo White 2" "No-CD Patch
Waa maxay App Zedge App?